Rosiàna mihiboka (mamerina) mamorona asakanto malaza ety anaty aterineto · Global Voices teny Malagasy
Lasa mibahana an-tsaina ao amin'ny firenena ilay pejy Facebook Izoizolyatsiya
Voadika ny 28 Avrily 2020 16:34 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, 繁體中文, Français, عربي, Ελληνικά, русский, Български, Español, українська, polski, 한국어, हिन्दी, ਪੰਜਾਬੀ, Português, English
Frida Kahlo, sary nataon'ny tenany ihany (1940), naverin'ilay mpampiasa RuNet , Maria Morozova natao indray , 25 Aprily 2020. Pikantsary avy tao amin'ny Facebook / Izoizolyacia.
Jereo ny fandrakofana manokana ataon'ny Global Voices momba ny Fiantraika manerantanin'ny COVID-19.
Tamin'ny 1868, nanoratra i Fyodor Dostoevsky hoe “ny hatsaràna no hanavotra ny tontolo.” Dimampolo amby zato taona taty aoriana, mbola ho hita eo ny fandehany; fa zavatra iray no azo antoka — tena afaka mampiala voly tanteraka antsika aty amin'ny tontolo ivelany mandritra ny valanaretina iray manerantany izany.
Raha tenenina hihiboka an-trano ny olona manerana izao tontolo izao, izy ireo kosa nikaroka fomba famoahana arahana fahaizana mamorona mba hanalavirana ny hamohamo sy ny sorisory. Fanamby iray an-tsary niavaka no niely toy ny vanja tety anivon'ny tambajotra sôsialy: famerenana mamorona ireo asakanto malaza, amin'ny fampiasàna ireo fitaovana tsotra fampiasa an-tokantrano.
Ireo sarontava fitondran'ny mpitsabo ary ny fijerena hafanan'ny vatana, endrika amantarana ny valanaretina Covid-19, no singa tena manandanja anatin'ireny fialamboly ireny. Lehilahy iray mitondra arontava, ravahan'ny vavany misanasàna, natao tamin'ny ‘marker’, mizity haka sary amin'ny dika avy ao an-tranony an'ilay The Scream an'i Edvard Munch. Horonana taratasy fifirana (izay azo lazaina ihany koa ho endrika namantarana ity vanimpotoana ity) nampiasaina ho solovolon'ny lehilahy iray mipetraka eo anoloanà ‘piano’ iray, maka tàhaka ny fipetrak'ilay hosodoko malazan'i Mozart. Ohatra vitsivitsy monja ihany amin'ireo fahaiza-mamorona tsy tambo isaina ao amin'ilay vondrona Facebook Rosiàna “IZOIZOLIZACIA”. Tsy fanatavezana resaka raha miteny hoe lasa zavatra mibahana ao an-tsain'ny ao amin'ny firenena ilay pejy.
Anarana natao hampita ireo teny rosiàna midika hoe “fihibohana” sy “asakanto ho an'ny maso” ny anaran'ilay vondrona. Hatreto dia mpikambana maherin'ny 500.000 no ao ary famoahana sata maherin'ny 100 isanandro. Ary na dia Rosiàna aza no ankamaroan'ireo mpikambana ao anatin'ilay vondrona mahafinaritra, mampifandray olona avy amin'izao tontolo izao ihany koa ilay izy ao anatin'izao vanimpotoana tsy hay intsony izao. Ny teny filamatry ny Izoizolyatsiya no milaza izany rehetra izany : “vondrompiarahamonin'ireo olona voafetra ny fivezivezeny fa tsy voafetra ny sainy tia mamorona”. Manana fitsipika vitsivitsy monja ny mpanorina ilay vondrona Facebook, Katerina Brudnaya-Chelyadinova, 38 taona : Izay zavatra hitanao ao an-trano ihany no anatontosanao azy, tsy ekena ny fikirakiràna ampiasàna rindrambaiko, tsy asiana intsony famerenana manamboatra ny “Black Square” an'i Kazimir Malevich — raha tsy hoe tena mahatsikaiky tanteraka tokoa izy ireny.
Ohatra, i Brudnaya-Chelyadinova, izy miasa ho an'ilay goavan'ny nomerika rosiàna Mail.Ru, nanomboka ilay fanamby tamin'ny fizaràna saripika ahitàna ny vadiny manova endrika ho Vincent Van Gogh misatroka penjy ao amin'ny Facebook. Rehefa nangataka ireo namany mba hizara ny sary avy any amin-dry zareo amin'ny famerenana mamokatra indray ireo hosodoko malaza, maro ireo nirotsaka nanao ilay fanamby. Mba hampivondronana ireo fandraisana anjara marobe, noforoniny tamin'ny 30 Martsa ilay vondrona Facebook. Tanatin'ny andro iray monja dia nahatratra 2.500 ny mpikambana.
Ny 17 Aprily, tao anaty antsafa iray niarahana tamin'ny fantsom-baovao rosiàna RBK, nasian'i Brudnaya-Chelyadinova tsindrimpeo ny hoe tsy irery izy amin'ny fitazonana sy fitantanana ilay vondrona, izay nitombo be tokoa ny lazany tamin'ny volana lasa iny. “Misy 11 ireo mpandrindra ato aminay amin'izao fotoana izao manao izay hampandeha ny vondrona amin'ny ora rehetra tontolon'ny andro, avy any Amerika hatrany Nouvelle-Zélande” hoy izy. “Tena ezaka goavana nataon'ireo namana manerana izao tontolo izao izany.”
Io fisian'ny mpikambana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao io dia ahitàna taratra ny zavamisy hoe tsy iray fotsiny amin'ireo fitsanganan-ko velon'ny fanambin'ny taokanto virtoaly miely patrana ny Izoizolyatsiya; hatramin'ny nanombohan'ny valanaretina COVID-19, marobe ireo kaonty misera ny resaka tahirin-tsary ety anaty media sôsialy no nanao hetsika mitovy amin'izany.
Vakio misimisy kokoa: Hotsarovana an-tsary ny revolisiôna ao Maosko, anaty aterineto sy anaty hosodoko
Tsy atao mahagaga, manana fitiavana manokana an'ireo asakanto malaza avy ao Rosia sy ny Firaisana Sovietika fahiny ireo mpikambana ao amin'ny Izoizolyatsiya. “Somary toy ny hoe maneso kely izany isika ao amin'ilay vondrona io,” hoy i Brudnaya-Chelyadinova niaiky tao anatin'ny antsafa iray ho an'ny RuNet Echo.
Izay indrindra, marobe amin'ireo saripika nozaraina no tena feno fahaizana mamorona tsy takatry ny saina ary mihen-danja amin'ny famerenan-dry zareo mamokatra ireo hosodoko tena sarobidy indrindran'i Rosia. Ilay tendrombohitra karandoha nataon'i Vasilii Vereshagin ao anatin'ny “Apotheosis of War” dia naverina nosainina ho toy ny lohanà Lego miparitadritaka. Saripika iray hafa indray manasongadina saka iray maka tàhaka an'i Lenina manao ‘salut’. Ireo bera ahafantarana an'i Ivan Shishkin ao anatin'ilay “Morning in a Pine Forest” dia naseho tamin'ny alàlanà bisikoitra napetraka ambony salady.
Misy vitsivitsy ihany koa ireo famerenana mamokatra asakanto malaza avy any ivelany. “The Last Supper” naverina novokarina nasiana infermiera ho solon'ireo apostôly; Ny “Saviour of the World” an'i Leonardo da Vinci, manasongadina sarin'i Jesosy mitazona kaopy misy ‘cornichon’ fa tsy ny planeta tany. Ny sasany tamin'ireo mpampiasa nitafy ‘tutus’ mba hamerenana ilay hosodoko ballerina malaza an'i Edgar Degas. Ny hafa nitafy “ushanka”, satroka rosiàna misy sofiny mikopakopaka, mba hanehoana ilay sarintena taorian'ny loza nanjo azy nataon'i Van Gogh.
Ireo fepetra takiana amin'ilay fanamby no nanosika ny maro tamin'ireo mpandray anjara hanandrana ireo zavatra fampiasa andavanandro tao an-tranony. Olona iray mpampiasa avy any Israely no naka ny fihetsik'i Salvador Dali, manao ankosotra matavy sy miaraka aminà famantaranandro mitsonika vita tamin'ny taratasy. Vehivavy iray namerina namokatra ny “Pandora” an'i Dante Gabriel Rossetti, fa ny vata volamena tao anatin'ilay hosodoko monja no nosoloina taminà boaty fitondrana sakafo McDonald. Tapakazo marobe no nentina naneho ny hosodoko iray ahitàna an'i Jackson Pollock.
Iray amin'ireo lahatsoratra tena malaza indrindra ao amin'ilay vondrona, ilay an'i Natalia Shevchenko, maneho ny “Dance” asakanton'i Henri Matisse tamin'ny 1910, naverina novokarina miaraka aminà makamba sy “noix” ambony harona plastika iray. Nahazo ‘Tia’ maherin'ny 39.000 izy io.
Marobe amin'ireny asakanto naverina nosainina ireny ihany koa no sarintena (selfie) nalain'ireo lasibika tafahitsoka an-trano mandritra ny fihibohana. Maro hafa mampiseho ny vady, ny sipa, ny biby ao an-tokantrano, ny raibe sy ny renibe, ny zanaka. Mameno ny pejy Facebook Izoizolyatsiya ireo saripika ahitàna olona manirery mitady fifandraisana — ary dia nahita izany mazava tsara.
Araka izany, toy ireo rehetra adalan'ny media sôsialy, dia mametraka ny fanontaniany avy aminy ihany koa ilay fanamby: lamaody fotsiny ihany ve ny famerenana mamokatra ireo asakanto malaza, sa misy filàna lalimpaka fifandraisana amin'ny asakanto sy eo amin'izy samy izy? Heverin'i Brudnaya-Chelyadinova fa ity farany no izy. “Etsy ankilany, marina fa lalao ity fanambin'ny asakanto ity,” hoy izy mamintina, “fa koa fomba iray hafa hampifandraisana sy firotsahana miaraka aminà asakanto tsy resin'ny fotoana ary hitadiavana fitoniana ao anatin'ny fiarahamonina.”